अभिषेकले उडाए सलमानको खिल्ली, ऐश्वर्या किन खुशी ? - Dainik Nepal
अभिषेकले उडाए सलमानको खिल्ली, ऐश्वर्या किन खुशी ?
दैनिक नेपाल २०७३ पुष २६ गते १५:४९
मुम्बई । ऐश्वर्या राय बच्चन र सलमान खानको प्रेमबारे अधिकांशले सुनेका सुनेका होलान् ।
आज पनि यदि यीं दुई जना एकै स्थानमा देखिएपनि समाचारको विषय बन्छ । यस्तै, सलमानको बारेमा ऐश्वर्याका पति अभिषेकले केही बोले पनि समाचारको विषयबस्तु बन्छ । एक कार्यक्रममा अभिषेक बच्चनले सलमानको खिल्ली उडाएका छन् ।
स्टारडस्ट अवार्डमा अमिताभ आफ्नो पुरै परिवारका साथ कार्यक्रममा पुगेका थिए । सोही कार्यक्रममा सल्मान खान पनि सामेल भएका थिए । त्यही कार्यक्रममा अभिषेकले सलमानको बारेमा मज्जाले खिल्ली उडाए । अभिषेकले सलमानको खिल्ली उडाएपछि ऐश्वर्या भने जोरले हाँसिन । अभिषेक बच्चन र रितेश देशमुख कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका थिए ।
अभिषेकले नोटबन्दीलाई लिएर सलमानको बारेमा बोलेका थिए । उनले भने, ‘सलमान लाइनमै नलागेर सिधै बैंकभित्र जान्छन् र भन्छन् म माथि कसैले कृपा गर्नुपर्दैन ।’ त्यस्तै, अभिषेकले आफ्नो पिता अमिताभ बच्चनका बारेमा पनि बोल्दै भने ‘लाइन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, जहाँबाट म खडा हुन्छु ।’
यीं सबै कुरा अभिषेकले मजाक गर्दै भनेका थिए । जुन कुरा सुनेर सबैले हाँस्दै ताली बजाएका थिए । तर, यसै दौडानमा ऐश्वर्याका सम्बन्ध सबै देख्न चाहन्थे । सलमानको नाम लिइरहेका बेला ऐश्वर्या प्रत्येक कुरामा हाँसिरहेको थिइन् ।
सलमानले पनि कैयौं पटक ऐश्वर्याको नाम नलिएर उनको तारिफ गरेका छन् । त्यस्तै, ऐश्वर्याले पनि सलमानलाई ओलम्पिकको ब्राण्ड एम्बेसडर बनाउने बेला समर्थन जनाएको थिइन् । तर, त्यसबेला पनि ऐश्वर्याले सलमानको नाम लिएकी थिइनन् ।
अमेरिकामा नायिकाहरूलाई सहभागी गराएर यौन व्यवसाय
के ओझा परिवारमा सर्वस्वीकार्य हुन् शिल्पा पोखरेल ?
वीराङ्गनाको ट्रेलरमा शिल्पा, अनुप र बाँदरसम्मको एक्शन (भिडियोसहित)
‘सर्वहारा’को साथमा १२ वर्षपछि तिलक (भिडियो सहित)